Al-Shabaab oo maanta la wareegay deegaan ka tirsan gobolka Galgaduud | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Al-Shabaab oo maanta la wareegay deegaan ka tirsan gobolka Galgaduud
Al-Shabaab oo maanta la wareegay deegaan ka tirsan gobolka Galgaduud
Cadaado (Halqaran.com) – Maleeshiyaadka Ururka Al Shabaab ayaa Axaddii maanta bilaa dagaal kula wareegay deegaan hoos-tagga Degmada Cadaado ee Gobolka Galgaduud.
Al-Shabaab ayaa saacado ka hor gudaha u galay Deegaanka Cadakibir, oo qiyaastii 70km u jira Degmada Cadaado ee Xaruntii hore ee Maamulka Galmudug.
Deegaankan ayaa waxaan horey u joogin Ciidamada Maamulka Galmudug, waana taa midda u sahashay inay si nabdoon kula wareegeen Ururka Al- Shabaab.
Wararka ayaa sheegaya in Shabaabka la wareegay Deegaanka Cadakibir ay wateen gaadiidka dagaalka, isla-markaana ay ka taggeen Degmada Xarardheere ee Gobolka Mudug.
Saraakiil Shabaabka ka tirsan oo fagaare ku yaala deegaankaasi kula hadlay dadka deegaanka ayaa ugu baaqay inay la shaqeeyaan ururka, isla-markaana ay ka fogaadaan la shaqaynta Maamulka Galmudug.
Dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta Halqaran.com ayaa ku soo warramaya in aanay garanayn in maleeshiyaadka Ururka Al-Shabaab ay sii jooggi doonaan deegaankaasi iyo inay dib ugu laabanayan halkii ay ka yimaadeen.
Ugu dambeyn, deegaanka Cadakibir oo laga xukumo Cadaado ayaa ah deegaan nabdoon, marar kala duwana waxaa booqasho ku tagey masuuliyiin ka tirsanaa maamuladii hore ee Galmudug.